Akhri : Senator Ilhaan Cumar Oo Xidhiidh Saaxiibtinimo La Sameysatay Nin Caddaan Ah Oo Xaas Leh Kadib Markii Ay Iska Furtay Dhawaan Ninkeedii + (Sawirro) | Caroog News
Akhri : Senator Ilhaan Cumar Oo Xidhiidh Saaxiibtinimo La Sameysatay Nin Caddaan Ah Oo Xaas Leh Kadib Markii Ay Iska Furtay Dhawaan Ninkeedii + (Sawirro)
Senator Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congresska Maraykanka ayaa xiriir cusub la sameysamatay Tim Mynett oo kaaliyaasheeda ka mid isla markaana xaasle ah, ka dib markii ay ka guurtay odaygeedii hore oo ahaa nin Soomaali ah sida uu uu daabacay wargeyska daily mail ee ka soo baxa dalka Britain.
Ilhaan ayaa horey loo arkay iyadoo ay gacanta iska haysteen nin aan la garanaynin xilli ay ka cashaynayeen makhaayad ku taalla Los Angeles bishii Maarso. balse ninkaasi ayaa haatan noqday Mynett, oo xilligaa isku dayay in kaamiro duubaysay uu gacanta u dhigo
Gabadhan Soomaaliyeed ee qaadatay dhalashada Maraykanka oo 37-jir ah, ayaa la sheegay inay aad iskugu dhow yihiin Mynett 38 oo jir ah, kaasoo muddo dhowr bilood ah u ahaa qorsheyahan dhanka lacag ururinta ah.
Mynett oo xaaskiisa lagu magacaabo Drs. Beth Mynett ayaa Jariidada Daily Mail waxay xaqiijisay inuu dhowaan kasoo guurey, isagoo iminka si joogto ah ugu nool guri qaali ah oo uu ka degey magaalada Washington D.C.
Waxaa jira sawirro badan oo muujinaya Mynett iyo Cumar oo aad iskugu dhow, iyagoo si gaar ah isula safray Los Angeles, New York City, Austin, Seattle iyo meelo kale.
Mynett ayaa xitaa marar badan lagu arkay isagoo la jooga Ilhaan iyo gabadha Ilhaan ee Isra oo 16 jir ah.
Sida ku cad diiwaanka Guddiga Doorashooyinka Federaalka.Xisbiga Dimoqraadiga ayaa Ilhaan u kireeyey sharikad uu leeyahay Mynett – E Street Group – taasoo ay uga baxday $250,000 oo doollar oo loo isticmaalay talooyin iyo kharashaad safar min Juun ilaa bishan Agoosto.
Arrintan ayaa xoojineysa wararkii horey u soo baxay ee sheegayey in Ilhaan Cumar ay ka tagtay odaygeedii hore ee Axmed Xirsi oo ay isku dhaleen 3 carruur ah.
Xaaska Mynett, Dr. Beth Mynett oo Daily Mail ay wax ka weydiisay arrintan ayaanan beenin inkastoo ay ka gaabsatay iney faahfaahin ka bixiso.
Dhanka kale, Daily Mail ayaa soo qaatay sawir uu ku xoojinayo jiritaanka kala tagga, isagoo soo qaatay Xirsi oo xilligii ay Ilhaan ku noqonaysey Minnesota kasoo baxaya maqaaxida Starbucks Coffee oo u dhow guriga ay horay u wada deganayeen, iyadoo Ilhaan aysan beenin, arrinta ku saabsan inay kala tageen caruurteeda aabahood.